Choputa Piazza Navona na ihe niile o nwere | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | General, Rome
Onye ukwu Piazza Navona bụ otu n'ime ebe ndị kachasị ewu ewu na Rome niile, otu n’ime akụkụ ya ndị kachasị etiti na ebe nzukọ maka ndị na-agafe agafe. N'ime ya ị ga - ahụ ụlọ ochie ochie mara mma, isi mmiri dị iche iche na ihe ncheta dị iche iche, yana oke ikuku dị mgbe niile. Ọ bụ otu n'ime isi okwu siri ike nke nleta n'obodo Rome.
N'oge ochie ọ bụ ebe dị mkpa, mana taa Piazza Navona bụ otu n’ime ebe ndị ịtụnanya na onye nnọchi anya Rom nile. N'ime ya anyị nwere ike ịnụ ụtọ nka abụọ dị na isi iyi ya yana ụlọ nri na okpokoro dị nso na-eme ka square a bụrụ ebe dị mkpa.
1 Akụkọ banyere Piazza Navona
2 Isi ihe atọ
2.2 Fontana na Nettuno
2.3 Isi iyi Moorish
3 Saint Agnes ke Agony
5 Obí Braschi
6 Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị Dị Nsọ
Akụkọ banyere Piazza Navona
Nke a square na-arị elu n’ebe Stadium ahụ dị, onye nyere iwu ka e guzobe site n'aka eze ukwu Domitian. Ewuru ámá egwuregwu a ọtụtụ narị afọ wee kwado ya egwuregwu, egwu na egwuregwu ndị egwuregwu. Ugbua n'oge emepechabeghị emepe, a malitere iwu ụlọ na mkpọmkpọ ebe nke ama egwuregwu Rome. Na narị afọ nke XNUMX, ọ bụ mgbe ọrụ nke ebe a dị ka etiti obodo n'obodo ahụ bilitere n'ezie n'ihi mbufe nke ahịa dị na Capitol. Ọ bụ iwu nke Pope Innocent X nke wetara ịma mma ahụ ọ na-enwe taa, yana atụmatụ ya na isi iyi ya. Ahịa ahụ emere ebe a kwagara na square Campo de Fiori. E mekwara otu emume a na-achọsi ike nke mere na Satọdee na Sọnde n'August, mmiri kpuchiri isi iyi ndị ahụ nke mere na etiti mpaghara square ahụ jupụtara na mmiri ma ihe niile dị ka ọdọ.
Akụkụ a nwere ọdịdị akụkụ anọ, na-echekwa otu ụzọ ahụ ochie Stadium, na ụlọ ndị dị na mpaghara nke ga-abụ nkwụnye. Ọtụtụ isi iyi na-apụta na etiti ya ma bụrụ otu n'ime ebe kachasị mma ya. Ha bu uzo ato ato nwere oke ocha nke di nkpa ma mara nma nke anyi ga akpowa.
Font a nke ap utara dika Isi iyi nke Osimiri Anọ dị n'etiti square ọ bụkwa ya kacha mkpa. Ezubere site na Bernini na narị afọ nke XNUMX na ụdị ejiji Baroque. Nnukwu obelisk ya pụtara ìhè na nnukwu ihe osise anọ ahụ bụ ọnụ ọgụgụ na-anọchite anya nnukwu osimiri nke kọntinent anọ ahụ. N’akụkụ kachasị elu bụ nduru nke Mmụọ Nsọ. N’ime mmiri ahụ ị nwekwara ike ịhụ eserese dị iche iche nke anụmanụ, dịka ọdụm, agụ iyi ma ọ bụ agwọ mmiri.
Fontana na Nettuno
Isi iyi nke Neptune dị na Ebe ugwu nke Piazza Navona. Isi mmiri a bụ Giacomo della Porta chepụtara isi iyi a, ya na nnukwu ntọala ya na akpụrụ akpụ nke Neptune na-awakpo ọdụm ọdụm.
Isi iyi Moorish
Nke a bụ mmiri ọzọ na square, nke dị na mpaghara ndịda. Ọ na-anọchite anya onye Africa guzo na mmiri nke na-alụ ọgụ dolphin nke anọ ọhụụ ọhụrụ gbara gburugburu. Ọ bụ ezie na Giacomo della Porta mepụtara isi iyi ahụ, emesịa tinye ihe oyiyi etiti, nke Bernini mepụtara.
Saint Agnes ke Agony
Churchlọ ụka a dị n’ebe ndị na-agba ámá egwuregwu na-adịbu. Ọ bụ ụka n'ụdị Baroque, dị ka akụkụ ndị ọzọ nke square, nke iwu nke Pope Innocent X kere. Mputa ya baroque dị ezigbo mma, mana ọ dịkwa mma ịbanye n'ime, ebe ị nwere ike ịhụ nnukwu dome, ebe enwere fresco na Assumption nke Mary. N'ime ị nwekwara ike ịhụ ọmarịcha ihe osise ọfụma yana ọrụ dịka Ọnwụ nke Saint Alexius, Martyrdom nke Saint Eustace, Ọnwụ nke Saint Cecilia ma ọ bụ Ncheta Ncheta nke Pope Innocent X. Rainalidi wulitere ụlọ ụka a kamakwa nke Borromini.
Nke a mara mma Obí ugbu a nwere ụlọ ọrụ nnọchi anya mba Brazil. Borromini rụkọkwara ọrụ na okike ya ma n'ime ya ị ga - ahụ mkpokọta frescoes nke Pietro da Cortona. Tupu e resị ya Brazil, o nwere ọtụtụ ụzọ, ebe ọ bụ na narị afọ gara aga mkpa ọ dị belatara.
N'agbanyeghị na nke a neoclassical ụlọ Ọ naghị adị anyị ka obí eze, ọ bụkwa ebe nwere mmasị na Piazza Navona. Taa ọ nwere ụlọ Museo di Roma n'ime, na-akọ akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ site na Middle Ages ruo XNUMXth narị afọ. A na-ekwupụta ihe ọdịnala ọdịnala ma na-agbaghasị na ụkpụrụ ụlọ baroque nke square.
Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị Dị Nsọ
Mmalite nke chọọchị malitere na narị afọ nke XNUMX, ọ bụ ezie na ụlọ anyị na-ahụ taa bụ nke na-adịbeghị anya. Na facade bụ n'oge na-adịbeghị anya mana ọ bụkwa ụlọ akụkọ ihe mere eme, nke a na-akpọbu Church of Santiago de los Españoles.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Piazza Navona na Rome